Nhau - Matipi eKisimusi 2020
Kune vanhu vazhinji, Kisimusi ichave yakanyanya kusiyana gore rino. Muchikamu chino, tinopa matipi mashanu ekutanga kubatsira kusimbisa hutano hwedu panguva uye mushure megore ra2020 rezororo.
Zuva rega rega, masayendisiti ari kudzidza zvakawanda nezvekuti SARS-CoV-2 inoshanda sei, uye majekiseni ari kuburitswa. Hongu, 2020 yanga ichinetsa, asi, nekutsvaga kwekurapa mudura redu rezvombo, tichakunda COVID-19.
Zvisinei, tisati takunda COVID-19, zvakadaro tinofanirwa kuramba tichichiremekedza. Tine mamwe matipi pazasi kuti iwe ugare uine hutano:
Hapana chinyorwa chekuchengetedza hutano hwepfungwa chingave chakakwana pasina kutaura nezvekurara. Isu hatizvipe iyo nzvimbo iyo yainoda mune yedu yanhasi, neon-yakavhenekerwa nyika. Tese tinofanirwa kuita zvirinani.
Kurasikirwa nehope kunokanganisa manzwiro edu. Izvi zvine hungwaru, asi zvinotsigirwawo nekutsvaga. Semuenzaniso, kumwe kuongorora kunopedzisa, "Kurara kwekurara kunowedzera zvakashata zvekukanganisa zviitiko zvezviitiko zvinokanganisa zvichideredza mhedzisiro yezviitiko zvinosimudzira zvibodzwa."
Mune mamwe mazwi, kana tikasarara zvakaringana, tinonyanya kunzwa kusagadzikana kana zvinhu zvikaenda zvisiri izvo, uye tinotadza kunzwa zvakanaka kana zvikafamba zvakanaka.
Saizvozvowo, kumwe kuongorora kwakaratidza kuti "vanhu vanowedzera kusagadzikana uye vanonzwa kushomeka kushoma mushure mekurara kwenguva pfupi." Zvakare zvakare, nguva yakaderera yekurara inoita senge yekudzora moyo.
Panguva iyo manzwiro erudzi arwadzikira, kurara zvishoma zvakawedzera ingave iri nyore nzira yekukwirisa zviyero mukutifarira.
Izvo zvakakosha kuti uzive, zvakadaro, kuti hukama pakati pekurara uye hutano hwepfungwa hwakaomarara uye nzira mbiri-dzehutano hwepfungwa dzinogona kukanganisa hutano hwekurara, uye kushomeka kwekurara kunogona kukuvadza hutano hwepfungwa.
2. Ramba uchishanda
Sezvo nekurara, chero chinyorwa chine chinangwa chekusimudzira hutano hwepfungwa chinofanira kusanganisira kurovedza muviri. Sezvo tembiricha inoderera, kuzvimanikidza kunze kunogona kuwedzera kunetsa. Masayendisiti akaratidzira kuti kurovedza muviri kunogona kusimudzira mameseji munguva pfupi uye kwenguva refu.
Ongororo yakaburitswa mu2019, semuenzaniso, yakawana hukama pakati pekushushikana kwemoyo pamwe nenjodzi yehutano hwepfungwa. Saizvozvowo, meta-ongororo ya2018 yakagumisa kuti "humbowo huripo hunotsigira pfungwa yekuti kurovedza muviri kunogona kupa dziviriro pakuonekwa kwekuora mwoyo."
Zvakakosha, isu hatifanire kumhanya mamaira-maminetsi mana kuti tiwane mabhenefiti epfungwa kubva mukurovedza muviri. Chidzidzo kubva muna2000 chakawana kuti ipfupi, 10-15-mineti kufamba kwakasimudzira manzwiro uye kuwedzera kudzikama.
Saka kunyangwe kana chiri chinhu chiri nyore, senge kutamba mukicheni yako kana kufamba nembwa yako kwechinguva chidiki, zvese zvinoita.
Ichokwadi kuti hapana kurovedza muviri kana kurara kunogona kutsiva kumbundira kubva kushamwari kana hama, asi kana manzwiro edu akakwidziridzwa kwechinguva kana huwandu hwepakati pedu hwakwidzwa, zvinogona kutibatsira kugadzirisa kuora mwoyo zvirinani uye kutangazve gore rakaoma iri.
Gara uine ruzivo nezve COVID-19
Tora zvinyorwa zvitsva uye neruzivo rwekutsvagisa-ruzivo painovhura coronavirus yakanangana nebhokisi rako rekushandisa.
3. Kugadzirisa kusurukirwa
Kune vanhu vazhinji, kusurukirwa kwave kutove chinhu chakakosha che2020. Kufunga nezveshamwari nemhuri panguva yeKisimusi kunogona kusimbisa iwo manzwiro ekuzviparadzanisa nevamwe.
Kuti urwise izvi, ita nhamburiko yekuita kusangana. Kunyangwe iri foni yakapfava kana yekukurukura pavhidhiyo, ronga dzimwe hurukuro mukati. Rangarira, hausi iwe wega unonzwa kusurukirwa. Kana zvakachengeteka uye zvichibvumidzwa munharaunda yako, sangana neshamwari kune imwe nzvimbo kunze uye tora kufamba.
Tarisa nevamwe - maemail, zvinyorwa, uye zvemagariro media zvinogona kubatsira munguva dzakadai. Panzvimbo pekuparadzwa, tuma "Makadii?" kune mumwe munhu waunosuwa. Ivo vanogona kukusuwa iwe, zvakare.
Ramba wakabatikana. Nguva isina chinhu inogona kufamba zvishoma. Tsvaga podcast nyowani, teerera kuimba nyowani kana dzekare, tora gitare iro, tanga kudhirowa zvakare, dzidza hunyanzvi, kana chero chimwe chinhu. Pfungwa yakabatikana uye inobata kashoma kuti igare pane kusurukirwa.
Ongororo ichangoburwa yakawana kuti vanhu vanopinda muchiitiko chinonakidza uye vanopinda mamiriro ekuyerera vakafambiswa zvirinani panguva yekuvhara nekuisa voga. Vanyori vanonyora kuti:
"Vatori vechikamu vanotaura nezvekuyerera kukuru vakataurawo nezvekunzwa kwakanaka, zviratidzo zvekushushikana zvakanyanya, kusurukirwa zvishoma, hunhu hwakanaka, uye hunhu husina hutano."
4. Idya nekunwa zvakanaka
Krisimasi inosanganisirwa muchidiki chikamu nekunyanyisa. Ini handifunge kuti zvingave zvakanaka kana zvine musoro kutarisira vanhu, muna 2020 wemakore ese, kudzikisa kudya kwavo kweTurkey.
Nezvo zvakataurwa, pane humbowo huri kukura hwekuti izvo zvatinodya zvinokanganisa manzwiro edu. Semuenzaniso, ongororo ichangobva kuitika inowanikwa muBMJ inopedzisa:
"Kudya zvine hutano, sekudya kweMediterranean, kunosanganisirwa nehutano hwepfungwa hwakanaka pane kudya" zvisina hutano ", sekudya kwekuMadokero.”
Tichifunga izvi, kuona kuti tinodya zvakanaka tichitungamira kusvika pamazuva anotevera Kisimusi zvinogona kutibatsira kuti tirambe tiine pfungwa dzakadzikama.
Tarisira zvakadzama, sainzi-yakatsigirwa misoro yenyaya dzedu dzakanakisa zuva rega rega. Tinya mukati uye chengetedza kuda kwako kugutsikana.
5. Gadzirisa zvinotarisirwa
Havasi vese vari papeji imwechete kana zvasvika padenda. Vamwe vanhu vanogona vachiri kungodzivirirwa, nepo vamwe vanogona kunge vakatera kune "denda kuneta" uye vachidzokera kune zvakajairwa nguva isati yakwana. Vamwe vachiri kushandisa mazwi akadai se "scamdemic" uye vachiramba kupfeka mask.
Dzimwe nhengo dzemhuri dzinogona kunge dzichimanikidza kudya kwemhuri, semazuva marefu ari kure a 2019. Vamwe, zvine hungwaru, vanogona kunge vari kuona chirongwa cheZoom-based chikafu.
Iyi misiyano muchinzvimbo inogona kukonzera kushushikana uye nekuwedzera kunetseka. Zvakakosha kuita hurukuro dzakajeka uye dzakajeka nenhengo dzemhuri nezve izvo zvavanogona kutarisira gore rino.
Rangarira, nechero rombo rakanaka, Kisimusi inotevera ichaona kudzoka kune imwe nzira yechinyakare. Ndinovimba, tichazongofanira kutsungirira Krisimasi iyi isina kujairika uye isina kugadzikana kamwe chete. Kana usiri kugadzikana nehurongwa hwemumwe munhu, iti "kwete." Uye namatira pfuti dzako.
Nemipikisi mune nhamba dzenhamba munzvimbo zhinji dzeUS, sarudzo inonzwisisika kudzikamisa kusangana kwevanhu sezvinobvira.
Kunyangwe mitemo, mirau, nemirau zvichisiyana pakati penzvimbo, kana zvasvika kwazviri, munhu wega wega anofanira kuzvisarudzira ega maitiro avanogona kuita mukati memutemo. Kuti udzivirire hutano hwako hwepfungwa, ita sarudzo yako uye usazvibvumidze iwe kudzidziswa kuti uite chimwe chinhu chaunofunga kuti chine njodzi zvakanyanya.
Nzira yakachengeteka yekunakidzwa neKisimusi gore rino, zvinosuwisa, ndeyokuzviita zvachose.
Pamwechete, matipi ataurwa pamusoro haakwanise kutsiva nguva dzakanaka dzatinotarisira kubva paKisimusi. Nekudaro, kana isu tikaita yakawanda yekuedza kudya chaiko, kurara kurudyi, uye nekufamba famba, iyo yekuwedzera mhedzisiro inogona kukwana kukwana kunakidzwa neimwe bhenefiti.
Rangarira, isu tiri pamba takananga. Tambanudza uye taura kushamwari uye mhuri kana iwe uchinzwa wakaderera. Mikana yacho ndeyekuti ivo vari kunzwa vakaderera, zvakare. Usambofa uchitya kutaura nezve zvaunonzwa. Hapana ari kuva nemwaka wezororo wavaitarisira.
Raira FDA inobvumidzwa kumba-Covid-19 bvunzo
Tora iyo online kuongorora kuti uone kana iwe uchikodzera iyo Covid-19 kumba-bvunzo kuburikidza.
Pakupedzisira, Chido chakanakisa kubva kwatiri!
Tinokuda iwe Kisimusi ine runyararo, inofara uye ine hutano!